ဘတ်ဖဲလိုးမြို့နေ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများအတွက် Burmese Community Services, Inc. | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၄၊ ၂၀၁၄
လက်ခံရရှိသော သတင်းများအရ အောက်ဖော်ပြပါ အသင်းအဖွဲ့အကြောင်းကို မျှဝေလိုက်ပါသည်။
Burmese Community Services, Inc. သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရောက်ရှိနေထိုင်သူလူဦးရေ ၈ ထောင်ခန့်ရှိသော ဘတ်ဖလိုးမြို့၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်တွင် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ လက်အောက်ခံအဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ သော်လည်းကောင်း ရယူခြင်းမရှိသော ပထမဆုံးနှင့်တခုတည်းသောလွတ်လပ်သည့် 501 (c) (3) အစိုးရအသိအမှတ်ပြု အေဂျင်စီဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့သည် ငွေကြေးနှင့်ဘာသာစကား အခက်အခဲဖြစ်နေသော ဥပဒေရေးရာအကူအညီ လိုအပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်များနှင့် ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူများအားလုံးကို ၄င်းတို့၏အမှုကိစ္စများအတွက် ရှေ့နေနှင့် စကားပြန်ရရှိရေး အပါအ၀င် အမှုအတွက်ငွေကြေးကုန်ကျမှုမရှိစေဘဲ ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်း၍ အခမဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိကြောင်းကိုသိစေအပ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ လူကြီးမင်းတို့၏ သတင်းဌာနမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများသိရှိကာ ၄င်းတို့၏ အခက်အခဲများကိုတဖက်တလမ်းမှ ကူညီရာရောက်မည်ဟုယုံကြည်မိပါသည်။ အခြားသိလိုသောအကြောင်းအရာများကိုမိမိတို့အား အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
P.S. If you need more information about CRLS project, please contact at: Lisa Strand, Chief Attorney, Legal Aid Bureau, 716-853-9555 Ext. 524, lgrad@legalaidbuffalo.org
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Business Directory, ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ, ကြော်ငြာကဏ္ဍ